ကတ်မီယမ် ← အိန္ဒီယမ် → သံဖြူ
3004360000000000000♠−64.0×10−6 cm3/mol (298 K)
အတည်ငြိမ်ဆုံး အိန္ဒီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
အိန္ဒီယမ် (Indium) သည် ပျော့သော (အလွယ်တကူပုံသွင်း၍ရသော)၊ တောက်ပသော သတ္တုတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အရောင်သည် ငွေဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်သည် အနားလေးခုနှင့် ထောင့်လေးခုရှိသည်။ အပူချိန် အမျိုးမျိုးပေါ်လိုက်၍ အရည်ပျော်ပြီး ဂယ်လီယမ်(Ga) ဒြပ်စင်နှင့် အုပ်စုတူ ဖြစ်သည်။ ဂယ်လီယမ်နှင့် အင်ဒီယမ် နှစ်မျိုးလုံးသည် ဖန်မျက်နှာပြင်ကဲ့သို့ ပြောင်လက် နေပါသည်။ အင်ဒီယမ်သည် လေထဲနှင့် ရေထဲတွင် တည်ရှိနိုင်ပြီး အက်စ်ဆစ် ထဲတွင် ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ အရည်ပျော်မှတ်ကို ကျော်လွန်၍ အပူပေးသောအခါ ခရမ်းရောင် မီးလျှံနှင့် အတူ အင်ဒီယမ်သည် မီးထတောက်ပါသည်။
အင်ဒီယမ်ကို အရည်ပျော်မှတ် နှိမ့်သော သတ္တုစပ် များအတွက် အသုံးပြုပြီး အခြားသတ္တု မျက်နှာပြင်များ ခံနိုင်ရည် ပိုမို မြင့်မားစေရန်အတွက် အကာအကွယ်ပေးသော အပြားအဖြစ်လည်းအသုံးပြုပါသည်။ မှန်မျက်နှာပြင်တွင်လည်း တိုက်စားခြင်းကို ကာကွယ်စေရန် အင်ဒီယမ်ကိုအသုံးပြုပါသည်။ ဖန်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အင်ဒီယမ် အငွေ့ပြန်သည့်အခါ မှန်ကို ကြည်လင်သွားစေသည်။ အင်ဒီယမ် အလွှာပါးကို နျူးကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုထဲတွင် ဘာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်သလဲ ဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် အသုံးပြုကြသည်။ အင်ဒီယမ်ကို ဖိအားနှိမ့် ဆိုဒီယမ် အငွေ့သုံး ဖန်ချောင်းထဲတွင် အလင်းကော်ပြား ကဲ့သို့လည်း အသုံးပြုကြသည်။
အင်ဒီယမ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မတွေ့ရပေ။ ထွန်ယက်ပြီးသား မြေပေါ်တွင် အင်ဒီယမ်ကို သဘာဝမြေပေါ်ထက် ပိုမို ပေါများသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး တချို့ အဆင့်များတွင်4ppm အထိ အင်ဒီယမ် ပါဝင် ပါသည်။ စက်ရုံများတွင် အရည်ကျိုထားသော ဇင့်(smelting zinc) နှင့် lead sulphide ores တို့မှ အင်ဒီယမ် 1% ပါရုံဖြင့် အင်ဒီယမ်ကို ထုတ်ယူနိုင်သည်။ မပေါင်းစပ်ထားသော အင်ဒီယမ်သတ္တုကို ရုရှားဒေသတွင် တွေ့ရှိပြီး အင်ဒီယမ် အရောအနှော (indite) များကိုမူ ဆားဘီးယားနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော် အလွန်ရှားပါး လှပါသည်။ ကမ္ဘာ့ အင်ဒီယမ် ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏ အားလုံးနီးပါးသည် ကနေဒါနိုင်ငံမှ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် အင်ဒီယမ် ထုတ်လုပ်မှု နှုန်းမှာ ၇၅တန် ဝန်းကျင် ထုတ်လုပ်သည်။ သိုလှောင်ထားသော အင်ဒီယမ်ပမာဏမှာ တန် ၁၅၀၀ ဝန်းကျင်ရှိသည်။
အင်ဒီယမ်သည် ဇီဝဆိုင်ရာ အခန်းဏ္ဍတွင် မပါဝင်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း ဇီဝဖြစ်စဉ်များအတွင်း အင်ဒီယမ် ပမာဏ အနည်းပါဝင်သည်ဟု ယူဆထားကြသည်။ အင်ဒီယမ် ဒြပ်ပေါင်းများကို လူများတွင် ရှားရှားပါးပါး တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အင်ဒီယမ် ဒြပ်ပေါင်းများသည် မြင်မားသော အဆိပ်အတောက် အဖြစ် မှတ်ယူသင့်သည်။ အင်ဒီယမ် ဒြပ်ပေါင်းများသည် နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်နှင့် အသည်းတို့ကို ပျက်စီးစေသည်။ အင်ဒီယမ်၏ လူ့ကျန်းမာရေး အပေါ် အကျိုးပြုသည့် အချက်အလက် မရရှိသေးသည့်အတွက် ဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ်သင့်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထဲတွင် အင်ဒီယမ် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် မပျံ့နှံ့ခင်ကတည်းက ကုန်းသတ္တဝါနှင့် ရေသတ္တဝါ များအပေါ် အန္တရာယ် ပြုခဲ့ခြင်းမရှိသော်လည်း အင်ဒီယမ်၏ ပတ်ဝန်းကျင် သက်ရောက်မှုများ နှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမှုများ မပြီးဆုံးသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။
↑ "Determination of the Indium Freezing-point and Triple-point Temperatures" (1989). Metrologia 26 (4): 211. doi:10.1088/0026-1394/26/4/001. Bibcode: 1989Metro..26..211M.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိန္ဒီယမ်&oldid=723002" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။